Iva Nemafungiro Aiva Nevaprofita | Yokudzidza
Nharireyomurindi—Yekudzidza | March 2016
SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lithuanian Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mongolian Mutauro Wemasaini wokuAngola Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sena Serbian Serbian (Roman) Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Zapotec (Isthmus)
Ezekieri akazvipira kuita seakakomba guta reJerusarema
Iva Nemafungiro Aiva Nevaprofita
UPENYU hwako hune pahwakafanana nehwevaprofita vekare here? “Tsanangudzo Yemashoko emuBhaibheri” iri muShanduro yeNyika Itsva yeChirungu ya2013 inoti: “Muprofita munhu anozivisa zvinangwa zvaMwari. Vaprofita vaitaura vachimiririra Mwari, vachizivisa zvaizoitika munguva yemberi, uye vaitaura zvinodzidziswa naJehovha, mirayiro yake nemitongo yake.” Kunyange zvazvo usingaiti zvimwe zvaiitwa nevaprofita ivavo, iwe unotaurawo uchimiririra Mwari, uchizivisa zviri muShoko raMwari.​—Mat. 24:14.
Tine ropafadzo yakakura yekuudza vanhu nezvaMwari wedu Jehovha, tichivadzidzisa chinangwa chaakasikira vanhu. Tiri kuita basa iri pamwe chete ‘nengirozi iri kubhururuka nepakati pedenga.’ (Zvak. 14:6) Asi pane zvimwe zvinhu zvinogona kutitadzisa kuona kuti basa ratinaro iropafadzo yakakura. Zvinhu izvozvo ndezvipi? Tinogona kuneta, kuora mwoyo, kana kuti kunzwa setisingabatsiri. Izvi zvakamboitikawo kuvaprofita vainge vakatendeka vekare, asi havana kukanda mapfumo pasi. Uyewo Jehovha akavabatsira kuti vaite mabasa avaifanira kuita. Funga nezvevaprofita vanotevera, woona kuti ungavatevedzerawo sei.
Dzimwe nguva mabasa atinoita zuva nezuva anotisiya tarukutika uye tinonzwa sekuti hatichakwanisi kuenda kunoparidza. Ichokwadi kuti tinofanira kumbozorora; kunyange Jesu nevaapostora vake vaitombozororawo. (Mako 6:31) Asi chimbofunga zvaifanira kuitwa naEzekieri paaiva kuBhabhironi nevaIsraeri vainge vatapwa kubva kuJerusarema. Mwari akamuudza kuti atore chidhinha onyora achiita zvokutemera pamusoro pacho mufananidzo weguta reJerusarema. Ezekieri aifanira kuita seari kukomba guta racho rokufananidzira. Kuti aite izvi, aifanira kurara nerutivi rwake rweruboshwe kwemazuva 390 akatarisa chidhinha chacho uye nerutivi rwake rwerudyi kwemazuva 40. Jehovha akaudza Ezekieri kuti: “Tarira! ndichakusunga netambo kuti urege kupindukira kune rimwe divi rako uchibva kune rimwe divi rako, kusvikira wapedza mazuva okukomba kwako.” (Ezek. 4:1-8) Izvi zvinofanira kunge zvaishamisa vaIsraeri vaiva muBhabhironi. Ezekieri akaramba achiita zvaainge audzwa naJehovha kwerinopfuura gore kunyange zvazvo zvainetesa. Muprofita uyu akakwanisa sei kuita basa rake?
Ezekieri ainyatsoziva kuti nei akanga anzi aite basa rokuprofita. Mwari paakamutuma akamuudza kuti: “Kunyange [vaIsraeri] vakateerera kana kuti vakaramba . . . , vachazivawo kuti pakati pavo paiva nomuprofita.” (Ezek. 2:5) Ezekieri akaramba achifunga nezvechinangwa chebasa rake. Saka akazvipira kuita zvaakanzi aite. Akaratidza kuti aiva muprofita wechokwadi. Iye nevamwe vaIsraeri vaiva kuBhabhironi vakazonzwa mashoko okuti: “Guta raputswa!” VaIsraeri vakabva vaziva kuti pakati pavo paiva nemuprofita.​—Ezek. 33:21, 33.
Mazuva ano tinonyevera vanhu nezvekuparadzwa kuchaitwa nyika yose yaSatani. Kunyange zvazvo dzimwe nguva tichinzwa taneta, tinoramba tichiparidza Shoko raMwari, tinodzokera kunoona vanhu vanenge vafarira, uye tinoitisa zvidzidzo zveBhaibheri. Uprofita hune chokuita nekuguma kwenyika ino yakaipa zvahuri kuzadziswa, tinofara nokuti tiri kushanda ‘tichizivisa zvinangwa zvaMwari.’
VAKATSUNGIRIRA ZVINHU ZVAIVAODZA MWOYO
Mudzimu waJehovha ndiwo unotibatsira kuti tishande nesimba, asi dzimwe nguva zvinoitwa nevanhu patinovaparidzira zvinogona kutiodza mwoyo. Ngatifungei zvakaitwa nemuprofita Jeremiya. Aisekwa uye aitukwa nemhaka yokuti aizivisa mashoko aMwari kuvaIsraeri. Pane imwe nguva Jeremiya akatotaura kuti: “Handisi kuzotaura nezvake, uye handisi kuzotaurazve nezita rake.” Jeremiya aiva nemanzwiro akafanana needu. Asi akaramba achizivisa mashoko aMwari. Nei akaramba achidaro? Muprofita wacho akati: “Asi mumwoyo mangu zvakava somoto unobvira wakavharirwa mumapfupa angu; ndakaneta nokuramba ndakanyarara, uye handina kukwanisa kuzvitsungirira.”​—Jer. 20:7-9.
Kufungisisa nezvemashoko atinozivisa kunotibatsira patinenge taora mwoyo nezvinoitwa nevanhu patinovaparidzira. Mashoko acho anobva aita “somoto unobvira wakavharirwa mumapfupa” edu. Kugara tichiverenga Bhaibheri zuva nezuva kunobatsira kuti moto uyu urambe uchibvira matiri.
VAKAITA BASA RAVAKAPIWA
Vamwe vaKristu vanonetseka pavanokumbirwa kuti vaite zvimwe zvinhu zvavasinganyatsonzwisisi. Izvozvo ndizvo zvinogona kunge zvakaitika kumuprofita Hosiya. Jehovha akamuudza kuti: “Enda, uwane mudzimai woufeve nevana voufeve.” (Hos. 1:2) Ngatitii wafunga kuroora, asi Mwari okuudza kuti munhu waucharoora anofanira kunge ari pfambi. Unonzwa sei? Hosiya akabvuma kuroora mukadzi akadaro. Akaroora Gomeri, uyo akamuberekera mwanakomana. Gomeri akazoberekazve mwanasikana nemumwe mwanakomana. Vana vaviri ava vaakazobereka vakanga vasiri vaHosiya asi vaiva voufeve. Jehovha akanga audza Hosiya kuti mudzimai wake aizotevera “vadiwa vake.” Ona kuti hapana kunzi ‘mudiwa,’ asi pakanzi “vadiwa.” Uye Gomeri wacho aizoda kudzokera kuna Hosiya. Dai uriwe Hosiya waizotorazve here mukadzi wako? Jehovha akaudza Hosiya kuti amutore. Muprofita wacho akatobhadhara kuti amutore zvekare.​—Hos. 2:7; 3:1-5.
Hosiya anogona kunge ainetseka kuti chii chakanaka chaizobuda pane zvaakanga anzi naJehovha aite. Asi kubvuma kwakaita Hosiya kuroora chifeve kunotibatsira kuona kurwadziwa kwakaita Wemasimbaose vaIsraeri pavakamupandukira. Uye chinofadza ndechekuti vamwe vaIsraeri vaida Mwari vakadzoka kwaari.
Mazuva ano hapana kana mumwe wedu anoudzwa naMwari kuti aroore “mudzimai woufeve.” Asi tine here zvatinodzidza kubva pakuzvipira kwakaita Hosiya kuroora mudzimai akadaro? Hongu. Tinodzidza kuti tinofanira kuzvipira kuzivisa mashoko akanaka oUmambo “pachena uye paimba neimba,” kunyange pazvinenge zvichitiomera. (Mab. 20:20) Zvimwe unomboomerwa nokushandisa dzimwe nzira dzokuparidza mashoko oUmambo. Vanhu vakawanda vanodzidza neZvapupu zvaJehovha vakataura kuti vanonakidzwa nokudzidza Bhaibheri asi vanoti havadi kuzoenda mudzimba dzevanhu vachinoparidza. Vakawanda vavo vakazotanga kuita basa iri ravaifunga kuti havambofi vakarigona. Saka izvi zvinoratidza kuti newewo unogona kubudirira pakushandisa nzira dzekuparidza mashoko akanaka dzinokuomera.
Tinowanazve chimwe chidzidzo pakubvuma kwakaita Hosiya kuroora pfambi. Aigona kuramba kuroora munhu akadaro. Hapana kana munhu aizomboziva nezvazvo kudai Hosiya asina kuzvinyora. Isuwo tinogona kuwana mukana wekuudza vanhu nezvaJehovha, uye kana tikasaushandisa, hapana angazviziva kuti takambouwana. Izvi ndizvo zvakamboitika kuna Anna uyo ari kuchikoro chesekondari kuUnited States. Mudzidzisi wake akaudza vana vomukirasi make kuti mumwe nomumwe anyore nyaya iri pamwoyo pake achipa zvikonzero zvekuti nei aine chokwadi nezvaari kutaura. Anna aigona kunge akatambisa mukana uyu wokuparidza. Asi akaona sokuti wakanga wabva kuna Mwari. Akafunga kuti vamwe vaizonzwa sei nenyaya yaanenge anyora, saka akanyengetera kuna Jehovha uye akabva ava neushingi. Nyaya yaakanyora nezvayo yaiva nemusoro waiti: “Uchapupu Hunoratidza Kuti Zvinhu Hazvina Kuita Zvokushanduka-shanduka.”
Vechidiki vedu vanotevedzera mafungiro aiva nevaprofita pavanoshinga kuzivisa vamwe kuti Jehovha ndiye Musiki wedu
Anna paakatsanangura zvaakanga anyora kukirasi, mumwe musikana aizivikanwa nekutsigira dzidziso yokushanduka-shanduka akatanga kumunaya nemibvunzo. Anna akapindura mibvunzo yacho yose achitsigira zvaanotenda. Mudzidzisi wake akafadzwa nazvo uye akamupa mubayiro panyaya yaakanyora nekuti akanga anyatsogona kuitsanangura. Kubva ipapo, Anna akatanga kukurukura nyaya dzine chokuita nekusikwa kwezvinhu nemusikana uya wokumunaya nemibvunzo. Kubvuma kwakaita Anna basa iri raakapiwa naJehovha kwakaita kuti azotaura kuti, “Iye zvino ndava neushingi hwokuparidza mashoko akanaka ndisingatyi.”
Kunyange zvazvo basa redu risina kunyatsofanana nerevaprofita vekare, kana tikatevedzera kuzvipira kwakaratidzwa nevaprofita vakadai saEzekieri, Jeremiya uye Hosiya, tichabudirira kuita kuda kwaJehovha. Pamunoita kunamata kwemhuri kana kuti paunenge uchidzidza uri woga, zvakanaka kuverengawo nezvevamwe vaprofita uye kuona kuti ungavatevedzerawo sei.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Iva Nemafungiro Aiva Nevaprofita
Vechidiki​—Magadzirira Here Kubhabhatidzwa?
Vechidiki​—Mungagadzirira Sei Kuti Muzobhabhatidzwa?
Zvaungaita Kuti Uwedzere Kubatana Kwatakaita sevaKristu
Jehovha Anotungamirira Vanhu Vake Munzira Yeupenyu
Unogona Kubatsira Muungano Yenyu Here?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA March 2016
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA March 2016
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA March 2016
Tevedzera Kutenda Kwavo